Comments si Wine nwe - Changyu Pioneer International Co., Ltd.
Ọ bụ ezie na dị mfe, Changyu Zenithwirl nwere ezigbo uto. M kwere na n'ezie, na-eto eto mbido eji ọkụ, gbalụ gbalụ, N fruity na obi ụtọ mmanya dị mma mmanya.
Brian K. Julyan MS, CEO nke International sommelier Guild:
Changyu Zenithwirl bụ adịghị mgbagwoju anya, ma ọ bụ kpọmkwem kwesịrị ekwesị ka anyị na-aṅụ kwa ụbọchị. Mmetụta nke na-aṅụ Zenithwirl bụ jụụ na-atọ ụtọ, N na price bụ-adabara kwa ụbọchị mmanya.
Robert Tinlot, na Chief refirii nke Rating Board of Institut National des Appellations d'Origine (INAO) na asọpụrụ president nke OIV., Appraised akọrọ red wine nke Changyu Pioneer okpuru ulo mgbe ọ gara 3rd Yantai International Wine ịkọwa
"Nke a bụ a ụwa-klas masterpiece! Ọ nwere miri ukwuu okpukpo, na ebube na mara owuwu. ya udidi bụ dị ka ezigbo ka velvet. naanị n'elu-larịị red wine na afọ akụkọ ihe mere eme nwere ike dị otú ahụ a uto. "
Yves Bénard, bụbu president nke OIV, kwuru mgbe ọ gara Beijing Chateau Changyu Afip Global ke 2009:
"Site na ịga ma akatabi okop na Afip, anyị ahụwo oké nwere na Chinese grape wine, nke na-eme anyị ezigbo anya na Akpata oyi wụrụ. Changyu Afip melite a ọhụrụ Benchmarking maka mba Chateau. "
Claudia Ines Quini, ugbu president nke OIV appraised ice wine nke ọlaedo diamond larịị si Chateau Changyu Golden Ice Wine Valley na Liaoning mgbe ọ gara 7th Yantai International Wine ịkọwa na 2013:
"Changyu ice wine bụ karịsịa uru na-eto, na ọ bụ a ụkọ Devid agụghị ndị gbara wine, na ebube-esi ísì ụtọ na-atọ ụtọ uto. "
Federico Castellucci, odeakwụkwọ-n'ozuzu nke OIV appraised Cabernet Sauvignon nke Ningxia Chateau Changyu Moser XV mgbe ọ gara 7th Yantai International Wine ịkọwa na 2013:
"Ọ bụrụ na 100 ihe jupụtara akara inwale a wine, m ga-enye ya 92 ihe, nke fọrọ nke nta a akara nke nnukwu slam. "
Jancis Robinson MW, otu n'ime ndị so dee World Map of Wine na Wine Vaịn, na British nna ukwu nke wine dere na The Best Wine na China na ya na kọlụm na na Financial Times bipụtara na September 20, 2013:
"Changyu ozugbo bụ ndị ọsụ ụzọ na Shandong si wine ụlọ ọrụ, ma ugbu a ọ bụ nnọọ ndị bellwether na ụlọ ọrụ. "
Gụọ John U Salvi MW, president nke British Wine na Mmụọ Association na zuru ụwa ọnụ, nna ukwu nke wine kwuru mgbe ọ gara Changyu na 2013:
"Ọ bụrụ na cabernet sauvignon of Beijing Chateau Changyu Afip Global adabara nri abalị, m ga-achọ ka ụfọdụ cabernet sauvignon of Ningxia Chateau Changyu Moser XV maka nri ehihie. "
The wine nke Chateau Changyu Moser XV Ningxia nwere ísì nke Italian truffle.
Mark Pardoe MW, ị nweta director British eze vintner BBR, so British ọchịchị Lancaster House okpuru ulo ị nweta advisory kọmitii, na nna ukwu nke wine, kwuru mgbe ọ nabatara Ajụjụ ọnụ nke The Guardian na 2013:
"Changyu egosi otú iwekota ọkachamara brewing technology nke wine emepụta 'si "ụwa ochie" na "ụwa ọhụrụ", n'ihi ya ka ike mbụ na klas mmanya. "
Fiona Beckett, British nri columnist, bipụtara wine akatabi okop ndetu abịa Food & Wine ka were 2009 ice wine nke ọlaedo diamond larịị si Chateau Changyu Golden Ice Wine Valley na Liaoning na 2013:
"The ice wine bụghị nnọọ oké ọnụ, ma ọ bụ nnọọ atọ ụtọ, na obi ụtọ-esi ísì ụtọ nke lemon, na nta oroma flavor. Echere m na ọ bụ ọbụna ọzọ maa mma karịa ndị nke-acha anụnụ anụnụ diamond na nwa diamond na ndị ọzọ dị oké ọnụ. "
Andreas Larsson, mmeri nke 12th World sommelier Asọmpi nke ASI, 2008 Ọgụgụ Award Winner nke Swedish Wine Institute appraised 2002 Cabernet Sauvignon of Beijing Chateau Changyu Afip Global na 2011:
"Ọ bụrụ na ọ na-tụnyere na ìsì akatabi okop ogbako, Changyu Afip nwere nnọọ ike aka Bordeaux Chateau. "
Hendrik Thoma MS, nna ukwu nke sommelier na Germany na usu nke Wine Strategy usoro ihe omume nke NDR TV appraised ice wine nke ọlaedo diamond larịị si Chateau Changyu Golden Ice Wine Valley na Liaoning:
"Ya àgwà bụ otú magburu onwe na ọ tụrụ m n'anya. Ọ nwere omimi na nkà nke German ice wine brewing technology. m n'aka na mmanya ahụ na-nwere ihe ọzọ ikpọ ahịa na-abịa afọ. "
Hugh Johnson, otu n'ime ndị dere World Map of Wine, ọkachamara British wine tụlee ubi, kwuru mgbe ọ nabatara nanị N'ajụjụ ọnụ nke Bill Saporato, a nta akụkọ nke American Time na October, 2013.
"The wine nke Ningxia Chateau Changyu Moser XV nwere ike mfe were dị ka a wine yiri Bordeaux. nke a bụ a na-ebili oké ike nke ụlọ ọrụ. "
Steven Spurrier, initiator nke Paris Wine-akatabi okop na British ama wine nkatọ appraised Changyu Cabernet na 2011 World Wine Outlook Summit:
"Ọ na-atọ ebube na-eji ire ụtọ flavor."
Robert Joseph, nchoputa nke British magazine International Wine, onye bụbu president nke IWC, appraised 2009 akọrọ red wine nke Shaanxi Chateau Changyu Reina na 2013:
"The wine bụ juputara n'ụtọ, na adụ tannins. E nwere flavors nke blackberry, udara na vanilla. ọ bụ na echiche ziri ezi Ọdịdị na ogologo mechara. "
Thierry Desseauve, nkwonkwo nchịkọta akụkọ na-na-isi nke Bettane & Desseauve si Nduzi na Mmanya nke France na ngalaba-nchoputa nke Bettane + Desseauve, otu nọọrọ onwe ha wine-akatabi okop gị n'ụlọnga, wine-akatabi okop gị n'ụlọnga chịkọtara ke ama akatabi okop 10 iche iche nke Changyu wine mgbe o letara na Yantai na 2013:
"The wine nke Changyu nwere ike mmetụta nke" ụwa ochie ", nke mara mma na lezie. iche iche wine, dị iche iche n'ógbè na dị iche iche akara ule nwere otu mmanya-eme na nkà ihe ọmụma."
Jonathan Ray, ama British wine nkatọ, onye dere All banyere Wine na Olee Zụrụ Wine na ndị ọzọ na akwụkwọ, na wine columnist of Daily Telegraph, kwuru mgbe ọ gara Yantai na 2012:
"Changyu Cabernet bụ ugbua a tozuru okè ika, na ọ bụ nnọchiteanya nke Chinese mmanya. "
Dr. Jamie Goode, 2012 Kwa Afọ Ọgụgụ Award & Best blogger nke IWSC, na nchoputa nke www.wineanorak.com bipụtara wine akatabi okop ekwu ka were Changyu Cabernet na 2012:
"The ọmarịcha esi ísì na-amasị ka mmanya si Loire Valley, na supple flavor, mara mma aromas nke udara na mkpụrụ osisi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ leafy. Ọ na-atọ ụtọ, keisi na nnọọ ezigbo, featuring silky udidi na-agafeghị oke ahu. "
Dr. Jose Vouillamoz, a nchoputa nke www.wineanorak.com, na 2012 Kwa Afọ Ọgụgụ Award & Best blogger nke IWSC bipụtara wine akatabi okop ekwu ka were Changyu Cabernet na 2012:
"The ọmarịcha esi ísì na-amasị ka mmanya si Loire Valley, na supple flavor, mara mma aromas nke udara na mkpụrụ osisi na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ leafy. Ọ na-atọ ụtọ-esi ísì ụtọ na nnọọ ezigbo, featuring silky udidi na-agafeghị oke ahu. "
Huang Yali, asọpụrụ president nke Les amis d'Escoffier Society na asọpụrụ enye Ndụmọdụ nke Hong Kong sommelier Association, appraised Changyu Pioneer okpuru ulo 1912 Pinzhongliquan:
"The akọrọ red wine si Changyu Pioneer okpuru ulo nwere ike ji mee ka otu n'ime ndị kasị elu larịị nnọchiteanya nke Chinese wine . ya na agba, okpukpo na uto, ihe niile na-egosi na o nwere magburu onwe ya mma, na ga-atọ mma mgbe afọ 15. "
"Ọ nwere fruity esi ísì, na ezigbo oak flavor. Ọ nwere ike vanilla flavor, ndị ọgaranya na adụ uto, na ezi anwụ ngwa ngwa, na ọ pụrụ iji tụnyere mma na otu afọ nke French Cognac."
"The ẹdude larịị nke Coyam ngwaahịa a karịa ọtụtụ Nsukka nke Cognac. N'ihi distillation usoro, Coyam otu nnyocha banyere nkọwa si ọtụtụ akụkụ dị iche iche, na ihe nile nkọwa nke nnyocha ka ẹdude Coyam elu àgwà ngwaahịa ekwe omume."
Ke ama akatabi okop Changyu AFIP kpọrọ nkụ Red Wine (Elu Mmanya), Frank Kammer kwuru na Changyu AFIP kpọrọ nkụ Red Wine na 2009 (Premium Wine) bụ nke style of "Napa" na aromas nke ndị tozuru okè morello, blackberry jam na blackcurrant. The velvety nwayọọ tannin kere a adabako mmetụta na a ọma nwere nke n'ihu mmepe. Changyu AFIP kpọrọ nkụ Red Wine na 2010 (Premium Wine) gosiri style of "Bordeaux" na mara na tozuru okè esi ísì agwakọta na fruity flavor nke ọchịchịrị piom na blackcurrant, na-ahapụ ihe magburu onwe uto.
Ke ama akatabi okop Changyu Moser IV kpọrọ nkụ Red Wine, Frank Kammer kwuru na Changyu Moser IV kpọrọ nkụ Red Wine na 2008 bụ mgbagwoju na-atọ ụtọ na aromas nke ọhịa tomato dị ka anụ ọhịa piom na kranberị, red ẹnịm mkpụrụ osisi na akọrọ herbal na nkà mmụta ọgwụ. Ọ bụ vivacious na echiche ziri ezi dị ka mgbidi dị ka udo na mpi na uto na elu tannin Ọdịdị na obi ụtọ na ọhụrụ aftertaste. Nke a bụ mmanya pụrụ iche n'ụzọ ọbụla.
Rose Murray Brown MW: Changyu Noble Dragon nwere zuru gbasiri na ọhụrụ nwa mkpụrụ okpukpo na mere anyị na-eche nke red wine nke Bordeaux, ma ọ bụ karịa na. Mgbe na ọ bụ ọnụ, ọ nwere ike na-eche na tozuru okè na juputara n'ụtọ mkpụrụ okpukpo, nke cedar flavor yiri ka ha si n'aka ndị tozuru okè obere osisi oak, uto nke etiti akụkụ bụ larịị green epupụta, na aftertaste bụ juputara n'utu na ike tannin uto, na-eme dum wine nwere mmetụta nke structure.When eleta Chateau Changyu na Yantai oge ikpeazụ, ndị pụrụ iche mmanya mmetụta nke a wine karịrị-atụ anya na superexcellent quality ekpe mmetụta miri emi na ya. Obi abụọ adịghị ya, N ọ bụ nnọọ uru akatabi okop.
"Ọ bụ na agba aja aja na obere ọkụ red, nke bụ a mara mma na agba. The esi ísì nke akpu bụ nnọọ ala. E nwere Limousin elecampane, bilie flavor, almond peach jam, na doro anya ifuru esi ísì. Ọ na-atọ ọcha na-elu ilu uto, ma nke ukwuu ala. Ọ nwere ogologo akụkọ ihe mere eme karịa nkịtị Cognac XO na Chinese ahịa, na ọ bụ nke mmezi etoju (25-30 afọ). " --By Robert Leaute, ama French Cognac akatabi okop assayer, na ugbu a na-chairing French LEC Cognac ọkachamara nnwale analysis laabu.)
Jeannie Cho Lee MW, mbụ Asian inweta MW wine nzere na wine ukwu na akwụkwọ nke "Asian okpo ọnụ" bipụtara akatabi okop ndetu na 2013 ka were 2008 Cabernet Sauvignon nke Chateau Changyu Moser XV:
"Dị Iche Iche si ọtụtụ Chinese cabernet sauvignon na merlot agakọ red wine, a wine nwere a mara mma flavor. Ọ bụ na miri-acha uhie uhie, na ike aromas nke blackberry na udara. Solid tannin na-nọgidere n'okpuru mmanya ike nke naanị 12.5%. Ọ na-atọ ka velvet. Soft tannins na flavor nke akpu na-egosi na merela agadi technology na-eji amamihe na akọ na-. "